Villa Vitalina, Valfegana kufuphi Bagni Di Lucca
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVitalie
IVilla yethu ikufuphi neBagni Di Lucca kunye neFornoli eneendawo zokutyela kunye neevenkile. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yendawo enkulu yangaphandle kunye ne-infinity style Pool (10m x 5m. 1.5m ubunzulu). Indawo yam ilungile kumaqabane kunye neentsapho (kunye nabantwana).
Relax nge-Infinity pool njengoko ikhupha amanzi ngobunono phantsi kweengxangxasi okanye ipholile kwiisofa ezingaphandle kunye nezitulo ziphunga iglasi yeProsecco kwibhari yakho. Dine Al fresco ukusuka kwi-BBQ kwaye udle phantsi kwepatio egqunyiweyo okanye ulinde iDeer ekuseni njengoko isitya egadini. Igadi igcinwe kakuhle kwaye ibaleka kwindawo enemithi ejikeleze iVilla enendawo yokupaka isango.
IVal Fegana yilali encinci kufutshane neFornoli kunye neBagni Di Lucca emazantsi entlambo yaseSerchio, ineBar/Restaurant ekumgama omfutshane, inika inkonzo ekhethekileyo yasekhaya. I-Fornoli kunye ne-Bagni Di Lucca yimizuzu embalwa yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Vitalie
Abaphathi bethu uRaffaella kunye noPaul baya kudibana nawe kwaye babekho ukuze bakunike naluphi na uncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bagni di Lucca